ममिलाई स्लिपिङ ट्याबलेट खुुवाएर भााईसँग चिकेको कथा | Miracle Nepal
ममिलाई स्लिपिङ ट्याबलेट खुुवाएर भााईसँग चिकेको कथा
मेरो नाम अनिता हो । म २२ वर्षकी भएँ । म अहिले डिग्रिमा पढ्छु । क्याम्पियन कलेजको घटनाबारे तपाईहरुलाइ थाहै नै छ होला । म त्यहि बातावरणमा हुर्...
मेरो नाम अनिता हो । म २२ वर्षकी भएँ । म अहिले डिग्रिमा पढ्छु । क्याम्पियन कलेजको घटनाबारे तपाईहरुलाइ थाहै नै छ होला । म त्यहि बातावरणमा हुर्केकी केटि हुँ । मेरो एउटा भाइ छ । क्या ह्यान्सम छ भने, मोरालाइ देखदा मेरो त मनै कस्तो कस्तो हुन्छ । कहिलेकाहीँ त छ्या आफ्नै भाइको बारेमा पनि के सोचेकी हुँला जस्तो लाग्छ । ऊ १८ वर्षको छ । डनबस्कोमा पढ्छ । बुबा सरकारी काममा हुनुहुन्छ । उहाँ प्राय बाहिरै बस्नुहुन्छ । घरमा ममी, म र भाइ बस्छौँ । तलका कोठाहरु भाडामा दिइएको छ । तलको तलाको एउटा कोठा भान्छा कोठा बनाएको छ । मेरो र भाइको कोठाको बिचमा टिभी कोठा छ । ममी अर्कै कोठामा सुत्नुहुन्छ ।
एकदिन बेलुका केहीँ काम परेर भाइको कोठामा गएको । मेरी बास्सै नी मोरा त आफ्नो तलको माल निकालेर खेलाउँदै रै’छ । मेरो त मन ढक्क फुलेर आयो । ए… के गरेको यस्तो भन्दै म हत्त न पत्त लाजले बाहिर निस्कें । त्यसलाइ पनि लाज लागेछ क्यार । म निस्कने बितिकै ड्याम्म ढोका बन्द गर्यो । कोठामा आएर त्यसकै बारेमा सोच्दै थिएँ । सम्झिँदै कत्कुत्ती लागेर आयो । मनमनै मोराको माल त कत्रो रैछ मेरोमा छिराउन पाए पनी हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो । भाई एकछिनपछी आएर दिदी प्लिज ममिलाइ नभन्दे है भनेर म्याउँ म्याउँ गर्न थाल्यो । दिदी ममिलाई नभन्दे है म तैँले भनेको जे पनी मान्छू बरु भनेर मेरो हाततिर सुमसुमाउ थाल्यो । मलाई भाइप्रति दया लागेर आयो । मेरो मनले भने फेरी भाइले फेरि पनि आफ्नो सामान निकाले हुन्थो जस्तो लागीरहेको थियो ।
मैले जिस्किँदै मोरा अनि ढोका नलाइकन पनि कोई त्यस्तो गर्छन त भनेर गाली गरेजस्तो गरेर च्याप्प समाएर गालामा टोकिदिएँ अनि भन्दिनँ जा गएर सुत भनेर पठाएँ । त्यो दिन मेरो मन रातभरीनै चन्चल भो । सबै लुगा खोलें अनि नांगै सूतें । आफ्नो दूध आफै माडें । औँला हालेर हस्तमैथुन गरें । त्यसपछिका दिन त मेरो लागी झन् बेचैनीले बित्न थाले । जहीले पनी भाई अगाडी आउँथ्यो त नजर त्यसको मालमा पुगी हाल्थ्यो । ऊ पनी मलाई आशलाग्दो नजरले हेरे जस्तो लाग्न थाल्यो । के गर्दो रै’छ भनेर एकदिन दिउँसो बाथरुममा नुहाउन जाँदा मैले बाथरुमको ढोका खुल्लै छाडेर नांगै नुहाउन थालें । आज थाह पाएँ, म नुहाउन थालेपछी भाई त प्वालबाट चिहाएर हेर्दो रहेछ । आज बाथरुमको ढोका खूल्लै थियो त्यसले अलिकती ठेलेपछी त खुलिगयो । मैले पनी था नपाए जस्तो गरेर दूध मोलीमोली नुहाएँ । पुतितिर हात लैजाँदा यसो कर्के आँखाले हेरेको त त्यो त के गरुँ र कसो गरुँ भएर बसेको रहेछ । गोली ठिक ठाउँमा लाग्यो भनेर म मख्ख परें ।
राती ममी तल भान्सामा गएको बेलामा के गर्दैछ । आज भने जाल हान्नु पर्यो भनेर म त्यसको कोठामा गएँ । कोठामा बसेर उ सायद मोबाइलमा पोर्न भिडियो हेर्दै थियो होला म जाने बित्तिकै मोबाइल सिरानि तिर हालिहाल्यो । जाडोको बेला थियो, “ए, के हो खै” भनेर मैलै मोबाइल खोसें । भरखर हेरेको क्लीप रन थियो । “पख तँ यस्तो फोहोरी कुरा मोबाइलमा राख्छस् ? ममीलाइ आज चाईँ नभनी कहाँ छाड्छु र” भनेर त्यसको मोबाइल बोकेर हिँडेजस्तो गरें । ए, पख! ममीलाइ भनिस् भने मार्दिन्छु भनेर ऊ मलाई झम्टेर आयो । म पनि भागे जस्तो गरें । ऊ मलाइ लखेट्दै आएर च्याप मेरो हात समातेर मोबाइल खोस्न थाल्दा मैले जानीजानी दूधले उसको जीउमा धक्का दिएँ । अघी देखीनै मोबाइलमा ब्लु फिल्म हेरीरहेको उसको उत्तेजना म अझै बढाउन चाहन्थें ।
मलाइ पनि हेर्न दे है त । उसंगको कृतिम लडाइमा हारे जस्तो गरेर मैले मोबाइल फिर्ता दिदैं भने । तँ पनी हेर्छस् र छ्या नहेर… ऊ फुत्कन खोज्यो म भने मुडमा थिएँ । मैले आजचैं जसरी भएपनी उसको दरो सामानको मजा लिन्छु भनेर सोचीसकेको थिएँ । के हुन्छ त तैँले हेर्दा हुन्छ मैलै हेर्दा हुँंदैन भनेपछी हामी दुबै जना ओछ्यानमा गयौं । दिदी एउटा कूरा भनूम तँ नरिसाउने भा उसले भन्यो ।
मैले भने “के हो, भन न…”
उसले भन्यो – “मैले अघि तैलैं नूहाएको देखें नी ।”
मैले जवाफ दिएँ – “मलाइ थाह थियो तैँले हेरेको ।”
उसले भन्यो – “तँलाइ लाज लाजेन ?”
मैले भनेँ – “के को लाज अस्ती तैलैं मलाइ आफ्नो डन्डा देखाको हैनस् ?”
उसले लजाउँदै भन्यो – “त्यो त तैलैं हेरेको थिइस् भन्ने मलाइ के था त !”
मैले भनेँ – “भो भो गफ न दे, तँ आजकाल मेरो जीउ हेर्न खुब खोज्छस् मलाइ सब थाहा छ ।”
ऊ अलि लजाए जस्तो गर्यो । “अब के लजाउँछस् ? ल अब मलाई तेरो मोबाइलको फिल्म देखा” मैले उसको बाटो खोलीदिएँ ।
उसले मोबाइलमा ब्लू फिल्मको क्लीप खोल्यो ।
“हेर दिदी यो क्याम्पियन कलेजको ।” कलेज ड्रेसमा रहेकी एउटी केटीलाइ पछाडीबाट सम्भोग गरेको त्यो पोर्न क्लीप मैले पहिल्यै निताको मोबाइलमा हेरी सकेको थिएँ तैपनी आज भाइसंग हेर्ने मौका गुमाउन चाहिनँ । दुबै जना ब्ल्याङ्केट ओडेर बसेका थियौँ ।
“खुब मजा हुँदो हो है दिदी, रुपेशले भन्यो ।
“मलाइ के थाह त । कहिल्यै यस्तो गरेको भा’पो त ।” मैले कहिल्यै नगरेजस्तो गरेर मुखले भनें तर मनमनै भनेँ – “तलाइ के थाहा कति मजा आउँछ भन्ने कुरा ।”
आज तलाई मजा चखाउँछु भन्ने लागिराको थियो,
“ए तेरो डन्ठा देखा न अस्ती मजाले हेर्नै पाइन” मैलै भने ।
ऊ पनि उत्तेजित हुँदै भन्यो – “पख है त…!” नभन्दै उसले आफ्नो लठ्ठी जस्तो लाँडो निकाल्यो ।
“आमै कत्रो र’छ” मैले आश्चर्य चकीत हँदै भने । हातले च्याप्प समातेको त तातेको फलाम जस्तै भएको रै’छ । “दिदी तेरो दुध पनी चलाउन दे न ।” रुपकले भन्यो । म नाटक गर्दै बोलेँ – “धेरै छाडा नबन है फेरि, आफ्नो दिदीको दूध चलाउँछु भन्न लाज लागिनँ ?”
उसले फकाउँदै भन्यो – “प्लिज दिदी, एकचोटि चलाउँछु न । तैले अघि नुहाउँदा कति चलाउन मन लागेथ्यो केई हुन्न क्या ।”
मैले बदमास् – “ला भनेर ब्रेसियरको हूक खोलीदिएँ । उसले त पिठो मुछे पो गर्न थाल्यो । मैले ए मोरा यसरी हैन क्या मुडमा आएर मुसार्नुपर्छ । भोली बुहारीको पनि यसरीनै छुइस् मात्रै भने त भाग्छे नि ।” भनेर उसको हात समातेर आफ्नो पन्जाले चार पाँच पटक थिची दिएँ । अब उ पनी मजाले चलाउन इमोसनमा आएर खेलाउन थाल्यो ।
उत्तेजीत हुँदै उसले दिदी मेरो भाई पनि खेलाइदेन कस्तो हुनेरैछ, केटीको दुध माडन त कस्तो मजा हुने आहा भन्दै मुखमा क्वाप्प हालेर चुन्न पो थाल्यो । मलाई जिरिङ्ग भएर आयो । मैले उसको लाडो च्याप समातेर खेलाउन थालेँ । जती जती मैले हल्लाउँदै जान्थेँ त्यतिनै मेरो उत्तेजना बढ्दै थियो ।
“ए अनु…, रुपेश… तिमीहरु के गर्दै छौ हँ ।” तलबाट ममिले कराउनु भयो । ला बुढियाले था पाइन् कि क्या हो भनेर मन ढक्क फुल्यो । ल अब भूजा खान आयो । ल भयो हिन भूजा खान । अनी आएर गरुम्ला । भनेर मैले आफ्नो ब्रेसीयरको लगाएँ । खाना खाँदै गर्दा ममीले सुस्केर हाल्दै भन्नुभयो – “उफ्… अनू आज कस्तो टाउको दुखि’राछ ।” मैले ममी भाँडा म माझिहाल्छु नि हजूर आराम गरिस्यो । भनेर बुढियालाइ फकाएर सुत्न पठाएँ । खाना खाएर यसो सोचेँ, बुढियाले हाम्रो खेल थाह पाईन भने त मार्छिन् । अनी मैले बुबाको ‌ओषधीको प्याकेटमा हेरे । त्यहाँ स्लीपीङ ट्याबलेट रै’छ । अनपढ बुडियालाइ के थाहा । अनी ममिको कोठामा गएँ अनि ममि सुतीस्यो भनेर सुत्न लगाएँ । “ओखती छैन हेर त, कस्तो टाउको दुखिरा’छ थिच्देन” ममिले भन्नुभयो । मैले “आ मम्मी… थिचेर के हुन्थ्यो एकछिन म औषधी ल्याइदिन्छु भनेर बाहिर निस्किएँ । एकछिन पछि स्लीपीङ ट्याबलेटलाई टाउको दुख्ने औषधी भनेर खान दिएँ । खै के हुन्थ्यो र यो यसले ममिले भन्नुभयो । मैले आराम गरिस्यो न, एकछिन पछि सन्चो हुन्छ भनेँ अनि म टिभि हेर्छु भनेर कोठाबाट निस्किएँ ।
एकछिन सीरियल हेरें । रुपेश कोठामै आयो मैले आंखा सन्काएँ । अनी हामी दुबैजना रुपेशको कोठामा गयौं ।
ए, रुपेश खै तेरो सामान भनेपछी उसले जिन्स पाइन्टको चेन खोलेर रनक्क ठन्किएको सामान झिक्यो । मैले पूरै पाइन्ट खोल्न भनेपछी उसले खोल्यो अनि मैले उसको लाडो मुखमा हालेर चुस्न थालें । उसले दिदी प्लीज तेरो पनी देखा न भन्न थाल्यो । मलाइ पनी अब उसले छिराइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न थालीसकेको थियो । मैले स्कर्ट मास्तिर फर्काएँ। खुट्टा फैलान रुपेशले भन्यो । मैले तिघ्रा फैलाइदिएँ । दुई चिराका बिचमा एउटा प्वाल । त्यो त मजाले हेरेको हेरै गर्न थाल्यो । अनी आफ्नो दुइवटा औँला ल्याएर भित्र पसायो । मैले हात हटाइदिएँ तर मैले नहटाओस् भन्ने चाहेको थिएँ । ल भयो अब जान्छु सुत्न भन्दै म उठें । दिदी प्लीज नजान । उसले मलाइ आफूतिर तान्यो र प्रश्न गर्यो – “सुन् न तिमीहरुको त्यो प्वालमा केटाहरुको माल कसरी छिर्छ नि ?” उसको यो प्रश्नले मलाइ बडो आनन्द आयो । म पनी यहि चाहन्थें । “चुप लाग, फटाह पसाए भा’पो थाह हुन्छ त । उसले एकचोटि मैले मेरो छिराइदिम त भन्यो । मलाई अब खपि नसक्नु भयो तै पनि स्वाङ पार्दै भने – तैले नै छिराइदिए पछि भिनाजुले के छिराउने त ?”
उसले मेरो ओँठमा किस गर्दै भन्यो – “भिनाजुले छिराएनी मैले छिराएनी उहीँ चिज हो क्यारे छिराउने । एकचोटि छिराई हेर्छु ल भनेर उसले आफ्नो लाँडो मेरो पुतितिर सोझ्याउन लाग्यो । उसले आफ्नो लाँडो मेरो पुतिमा छिराउन धेरै प्रयास गर्यो । मेरो पुतीको पानी मात्र च्याप च्याप भयो तर मरिगए छिरेनँ । उसले भन्दै थियो तेरो त कति टाइट बाख्राको जस्तो पुति रहेछ भन्याँ मेरो लाँडो छिर्दै छिरेन त । मैले उसलाई गिज्याउँदै भनेँ – “तँ जस्तो दिनदिनै ब्लू फिलिम हेर्दै खेलाउनेझै लागिस् त ।”
ह्या छोड पुरानो कुरा बरु “कसरी पसाउने त्यो भन न ।” मैले भने – “माल पनि सानो भए पो हुन्छ त । यसो गर तँ म माथी चढेर तेरो लाडोलाई मेरो पुतिमा राखेर माथिबाट कम्मरले ठेल, म पनि तलबाट बल गर्छु जान्छ कि लु आइज चढ ।” मनमनै मलाइ आनन्द हुन थालिसकेको थियो । ऊ त अगी देखी नै नांगै थियो । मैले पनी आफ्नो स्कर्ट खोली सकेको थिएँ । ऊ मेरो माथी घोँडा माथी चढेर लाडो पुतिभित्र ठेल्न लाग्यो । निकै टाइम लाग्यो पुतिभित्र छिर्नलाई । मेरो पुतीबाट पानी र रगत बग्न लाग्यो । मैले छोड्दे भो नगर्ने दुख्यो भनेर भाइलाई उठ्न लगाएँ तर ऊ गर्न पाएपछि किन उठ्थ्यो र । झन् जोड गएर ठेल्न लाग्यो । मलाई निकै पीडा भयो । जब उसले मेरो ओँठमा किस गर्दै र दूध चुस्दै बेस्करी ठेल्यो उसको लाडो मेरो पुतिभित्र ल्वाम्मै छिर्यो ।
मेरो योनीले टन्न पानि फ्यांकेको थियो । उसले भन्दै थियो – “अबुइ दिदी क्या मज्जा हुँदोरैछ ।” मलाई बल्ल पीडा कम भयो । पख तेरो लाडो अझै पुरै पसेको छैन अली बल गर । उ माथी सुतेर धक्का मार्न थाल्यो । “आह्ह … रुपक… कती मजा आयो… गर गर छिटो गर मलाई मजा दे… भित्र बाहिर गर… अझ बलियोसँग हान… ” म कराउन थालेँ ऊ मच्चीन थाल्यो । मलाइ खुब मजा आइरहेको थियो । ऊ वेहोशि बनेर घरी मेरो गाला, घरी ओठ, घरि दूध त घरी गर्दन चुम्दै मेरो पुतिमा प्लाट… फ्लाट… प्याट… प्लाट… प्लिच… प्लिच… प्लिच… गरेर चिकिरहेको थियो । स्याँ स्याँ गर्दै ए दिदी मजा आयो… क्या मजा हुँदो रैछ भन्दै खुब खुसी हुँदै ल्वाम ल्वाम पुतिभित्र लाडोँ ठेलिरहेको थियो । मलाई पनि पुरा मजा आइरहको थियो । ऊ मच्ची रहेको थियो । ऊ छिटो छिटो पुतिमा धक्का मार्दै थियो । “दिदि… दिदि… मेरी प्यारी अनु… आह्ह… आह्ह… आ… ह्ह… आह्ह… आहा…” गर्दै थियो उसको डन्ठाले पिच्कारी हानी गो । मलाइ भने पुगेकै थिएन । अब के गर्ने होला तैंले त खत्तम पारीस् नी मलाई… ऊ पनी पछुताउमा थियो । पिर नगर्नु दिदी नहुनु भइगो… उ टाउको निहुराएर बोल्यो । हैन मैले त्यो भनेको हैन । मलाई पुरा मजै आएन । तेरो माल झरि गयो अनि तेरो भाई पनि शिथिल भयो । उसले भन्यो – “ए दिदी फेरी उठ्छ होला । मैले हस्तमैथुन गर्दा तिन चार पल्टसम्म निस्किन्थ्यो ।”
म फुरुङ्ग हुँदै भनेँ – “हो र…? फेरि सक्छस् त
म खेलाउँछु है त भनेर मैले उसको लिङ्ग खेलाउन थालेको त फेरी उठ्यो । मैले – “रुपेश अब भने हतार नगरीकन बिस्तारै समय लगाएर गर है भने ।”
उसले पनि त्यसै गर्यो । उसले मलाइ तिन पटकसम्म पुरा समय लगाएर सम्भोग गर्यो । यस्तो आनन्द त कहीले आएको थिएन । अब दिनदिनै यसरी गर्ने है दिदि, उसले मेरो ओँठमा किस गर्दै भन्यो । मैले – “ल ल हुन्छ, अब सूत” भनेँ । म उठेर ममीको हालखबर बुझ्न गएँ । उहाँ अझै बिउँझिनु भएको थिएन र म भाइकै ओछ्यानमा आएर सुतेँ । राती बाह्र बजे तिर मात्रै हामी सुतेउँ । एक बजेतिर म मस्त निद्रामा थिएँ । भाई उठेर मेरो गुप्ताङ्क चाटिरहेको रहेछ । जब म बिउँझिएँ । उसले फेरि पनि मलाई चिक्न लाग्यो । रातभरि चिकेरनै हामीले उज्यालो बनायौँ ।
भोली पल्ट बिहान पख भाईसँग अन्तिम चोटी चिकेर म आफ्नो रुममा गएँ । मेरो तल्लो पेट कटकटी खाइरहेको थियो भने योनीमा पोली रहेको थियो । भाईले फेरि मेरो ढोका ढक्ढकायो । मैले ढोका खोलेँ । उसले म कुक्रुक्क परेको देखेर सोध्यो के भयो दिदी तँलाई ? मैले भने रातभरि सुत्नै नदिकन गरेर अझ के भयो नभन है थप्पड खालास् । ह्याँ तल्लो पेट र तलको नानी पोलेर कस्तो भा’छ । भाई आएर किस गर्दै भन्यो बिचरा मेरो दिदीको नानीलाई आथ्था भयो खै म मलम लगाइदिन्छु भने मेरै ओछ्याउनमा मलाई उतानो पारेर किस गर्न लाग्यो । दुखेको छ भन्दा पनि भाई घोँडा चढेर आफ्नो लाडो मेरो पुतीभित्र छिराएर फुसिको पिचकारी हानेरै छोड्यो । नभन्दै भाइले आएर गरिदिएपछि मेरो तल्लो पेट दुख्न र नानी पोल्न छोड्यो ।
आजकाल पनि बेलाबेलामा दिदीभाइ सुत्ने गर्छौं । कसैलाइ शंका हुने कुरै छैन । अर्को महीना महीनावारी भएन । कहीलेकांही त तलमाथी हुन्छ तैपनी मलाइ शंका लागेर चेक गराएँ । थ्याङ्क गड पेट बसेको रैन छ । आजकल भने म अली सतर्क भएकी छु तर डेट अनुकुलता हेर्दै भाईसँग मोज गर्न छोडिएको छैन ।
Miracle Nepal: ममिलाई स्लिपिङ ट्याबलेट खुुवाएर भााईसँग चिकेको कथा